Maaskarada mar dambe ma waalan yihiin ka dib sannad ay " taajir ka dhigayeen ", laakiin dadka qaar ayaa weli lumin malaayiin
Maaskarada mar dambe ma waalan yihiin ka dib sannad ay " taajir ka dhigayeen ", laakiin dadka qaar ayaa weli lumin malaayiin
Janaayo 12, Gobolka Hebei wuxuu ku wargeliyay in si looga hortago dhoofinta faafitaanka, Shijiazhuang City, Xingtai City, iyo Langfang City waa la xirayaa si loo maareeyo, shaqaalaha iyo gaadiidkuna ma bixi doonaan haddii aan loo baahnayn.Intaa waxaa dheer, kiisaska goosgooska ah ee Heilongjiang, Liaoning, Beijing iyo meelo kale ma joogsan, aagaggana waxay kor u kaceen meelaha khatarta ah ee dhexdhexaadka ah waqti ka waqti.Dhammaan qaybaha dalka ayaa sidoo kale xoogga saaray dhimista safarka inta lagu jiro Bandhiga Gu'ga iyo u dabbaaldegga sanadka cusub ee goobta.Isla markiiba, xaaladda ka-hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa waxay noqotay mid kacsan mar kale.
Sannad ka hor, markii ugu horreysay ee uu cudurku dillaacay, xamaasadda dadka oo dhan ee ah inay "dhacaan" waji-xidhka ayaa weli ahayd mid muuqata.Ka mid ah tobanka alaab ee ugu sarreeya ee uu ku dhawaaqay Taobao ee 2020, waji-xidhka ayaa si cajiib ah loo taxay.Sannadkii 2020, wadar dhan 7.5 bilyan oo qof ayaa ka raadiyey ereyga muhiimka ah "maaskaro" ee Taobao.
Bilowgii 2021, iibinta waji-xidhka ayaa mar kale keentay kobac.Laakiin hadda, uma baahnid inaan "qabsanno" waji-xidhaha.Shir jaraa'id oo ay dhawaan qabatay BYD, gudoomiyaha BYD Wang Chuanfu wuxuu sheegay in inta lagu guda jiro cudurka faafa, wax soo saarka maalinlaha ah ee BYD ee waji-xidhka uu gaaray ugu badnaan 100 milyan, "Kama cabsanayo isticmaalka waji-xidhka sanadka cusub ee sanadkan."
Ran Caijing wuxuu ogaaday in farmasiyada waaweyn iyo goobaha ganacsiga e-commerce, saadka iyo qiimaha waji-xidhashadu ay caadi yihiin.Xitaa ganacsiga yaryar, oo leh dareenka ugu sarreeya ee urta, ayaa laga waayay goobada asxaabta.
Sannadkii la soo dhaafay, warshadaha maaskaro waxay la kulmeen kor iyo hoos u dhac u eg rollercoaster.Bilowgii cudurka dillaacay, baahida loo qabo waji-xidhka ayaa aad u kordhay, waxaana gabaabsi noqday amarada ka imanaya dhammaan dalka.Khuraafaadka waji-xidhka "maalaynta hantida" ayaa la sameeyaa maalin kasta.Tani waxay sidoo kale soo jiidatay tiro badan oo dad ah si ay u bilaabaan inay si wadajir ah u galaan warshadaha, laga bilaabo shirkadaha wax soo saarka ilaa kuwa yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah."Duufaan" soo saarid maaskaro ah.
Mar, in lacag lagu sameeyo waji-xidho waxay ahayd mid fudud: iibso mashiinnada maaskarada iyo alaabta ceeriin, hel goob, ku casuun shaqaalaha, waxaana la sameeyay warshad weji-xidho.Dhaqtarka ayaa sheegay in marxaladda hore, maalgashiga raasumaalka ee warshadda maaskaro kaliya ay qaadato hal usbuuc, ama xitaa seddex ama afar maalmood, si ay dib ugu bixiso.
Laakiin "xilliga dahabiga ah" ee maaskarada taajirnimada waxay qaadatay dhowr bilood oo keliya.Kordhinta awoodda wax-soo-saarka gudaha, sahayda waji-xidhka ayaa bilaabay inay hoos u dhacdo baahida, iyo tiro warshado yaryar ah oo "kalabar ka baxsan" ayaa midba midka kale u dhacay.Qiimaha mashiinnada maaskarada iyo qalabka kale ee la xiriira iyo alaabta ceeriin sida marada dhalaalaysa ayaa sidoo kale caadi ku soo noqday ka dib markii ay la kulmeen kor u kac iyo hoos u dhac weyn.
Warshado maaskaro ah oo la aasaasay, shirkado liiska ku jira oo leh fikrado la xidhiidha iyo shirkado wax soo saara ayaa noqday kuwa ku hadhay guusha warshadahan.Hal sano gudaheed, dufcad dadka la tirtiray waa la dhaqi karaa, waxaana la abuuri karaa nooc cusub oo "warshad maaskaro soo saarta ugu weyn adduunka" -BYD waxay ku noqotay guul weyn warshadaha waji-xidhka 2020.
Qof ku dhow BYD ayaa sheegay in sanadka 2020, waji-xidhashadu ay noqon doonto mid ka mid ah saddexda ganacsi ee ugu waaweyn BYD, labada kalena ay yihiin kuwa aasaaska u ah iyo baabuurta."Waxa si muxaafid ah loo qiyaasaa in dakhliga maaskarada ee BYD uu yahay tobanaan balaayiin.Sababtoo ah BYD waa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu muhiimsan ee dhoofinta maaskarada."
Ma aha oo kaliya in ay jirto sahay ku filan waji-xidhka gudaha, dalkaygu waxa uu sidoo kale noqday isha muhiimka ah ee sahayda maaskaro ee caalamiga ah.Xogta Diseembar 2020 waxay muujineysaa in dalkaygu uu adduunka siiyay in ka badan 200 bilyan oo maaskaro ah, 30 qofkiiba adduunka.
Maaskarada xafladda yar waxay xambaarsan tahay dareemo aad u adag oo dadka sannadkii hore.Ilaa hadda, iyo laga yaabee xitaa waqti dheer ka dib, weli waxay noqon doontaa lagama maarmaan in qof kastaa uusan ka tagi karin.Si kastaba ha ahaatee, warshadaha maaskaro ee gudaha kuma soo celin doonaan "waalan" sanad ka hor.
Markii warshadu dhacday, waxaa bakhaarka ku jiray 6 milyan oo waji-xidho ah
Maaddaama Dabaaldegga Gu'ga ee 2021 uu soo dhow yahay, Zhao Xiu wuxuu ku laabanayaa magaaladiisii ​​si uu u baabi'iyo saamiyada warshadda maaskaro ee la-hawlgalayaasheeda.Waqtigaan, waxay ahayd hal sano markii la aasaasay warshadooda waji-xidhka.
Zhao Xiu wuxuu ka mid ahaa dadkii horaantii 2020 u maleeyay inuu qabsaday "gaarsiinta" warshadaha maaskaro.Waxa ay ahayd xilli “khiyaali sixirka”.Soosaarayaal badan oo maaskaro ah ayaa soo baxay midba midka kale, qiimuhu kor buu u kacay, markaa looma baahna in laga walwalo iibka, laakiin si dhakhso ah ayey u soo noqotay.Zhao Xiu wuxuu sameeyay xisaabin adag.Ilaa hadda, isaga laftiisa ayaa ku dhawaad ​​lumiyay in ka badan hal milyan oo yuan."Sanadkan, waa sida fuulista rollerka."Wuu taahay.
Janaayo 26, 2020, maalintii labaad ee sanadka cusub ee dayaxa, Zhao Xiu, oo ku dabaaldegayay sanadka cusub magaaladiisa Xi'an, ayaa taleefan ka helay Chen Chuan, "walaal weyn" oo uu la kulmay.Wuxuu u sheegay Zhao Xiu taleefanka in hadda laga heli karo suuqa.Baahida maaskaro waa mid aad u weyn, "fursadda wanaagsan"na waa halkan.Tani waxay ku soo beegantay fikradda Zhao Xiu.Way ku dhufteen.Zhao Xiu wuxuu haystay 40% saamiyada halka Chen Chuan uu haystay 60%.Waxaa la sameeyay warshad soo saarta wejiga.
Zhao Xiu waxa uu khibrad u leeyahay warshadahan.Kahor faafitaanka, waji-xidhashadu ma ahayn warshad faa'iido leh.Waxa uu ka shaqayn jiray shirkad maxalli ah oo ku taal Xi'an oo ku hawlan warshadaha ilaalinta deegaanka.Wax soo saarkiisa ugu muhiimsan wuxuu ahaa nadiifiyaha hawada, iyo maaskaro-ka-hortagga qiiqa waxay ahaayeen alaabooyin caawiya.Zhao Xiu waxa uu yaqaannay laba aasaas oo iskaashi oo keliya.Khadka wax soo saarka maaskarada.Laakin tani mar horeba waa kheyraad naadir ah iyaga.
Waqtigaas, baahida loo qabo maaskaro KN95 ma ahayn mid u weyn sidii dambe, marka Zhao Xiu wuxuu markii hore ujeedkiisu ahaa waji-xidhaha la tuuri karo ee rayidka ah.Laga soo bilaabo bilowgii, wuxuu dareemay in awoodda wax-soo-saarka ee labada khad ee wax-soo-saarka ee aasaaska aysan ahayn mid aad u sarreeya."Waxay kaliya soo saari kartaa wax ka yar 20,000 oo waji-xidho ah maalintii."Markaa waxay si fudud ugu kharash gareeyeen 1.5 milyan yuan khad wax soo saar cusub.
Mashiinka maaskarada ayaa noqday badeecad faa'iido leh.Zhao Xiu, oo ku cusub khadka wax soo saarka, ayaa markii ugu horeysay la kulmay dhibaatada iibsashada mashiinka maaskaro.Meel walba ayay dad ka raadiyeen, ugu dambayntii waxay ku iibsadeen qiimo dhan 700,000 yuan.
Silsilad-warshadaha ee waji-xidhka ee la xidhiidha sidoo kale waxay si wada jir ah u keeneen qiimo cirka isku shareeray horraantii 2020.
Sida laga soo xigtay "Wararka Ganacsiga Shiinaha", qiyaastii Abriil 2020, qiimaha hadda ee mashiinka maaskarada ee KN95 oo si otomaatig ah u dhammaystiran ayaa ka kordhay 800,000 yuan cutubkiiba ilaa 4 milyan yuan;Qiimaha hadda ee mishiinka maaskarada ee KN95 oo nus-otomaatig ah Waxa kale oo uu ka kacay dhawr boqol oo kun oo yuan wakhti hore ilaa laba milyan oo yuan.
Sida laga soo xigtay khabiir ku takhasusay warshadaha, qiimaha asalka ah ee warshadda sahayda buundada sanka maaskarada ee Tianjin wuxuu ahaa 7 yuan kiiloogi, laakiin qiimuhu wuxuu sii socday inuu kordho hal ama laba bilood kadib Febraayo 2020. , laakiin sahaydii weli waa gabaabsi.
Shirkadda Li Tong waxay ku hawlan tahay ganacsiga shisheeye ee alaabada birta ah, waxayna sidoo kale heshay ganacsiga xirmooyinka sanka maaskaro markii ugu horeysay bishii Febraayo 2020. Amarka wuxuu ka yimid macmiil Kuuriyaan ah oo dalbaday 18 tan markiiba, iyo ajnabigii ugu dambeeyay. qiimaha ganacsigu waxa uu gaadhay 12-13 yuan/kg.
Si la mid ah kharashka shaqada.Baahida suuqa oo ballaaran iyo ka hortagga cudurrada faafa awgeed, shaqaalaha xirfadda leh waxaa lagu tilmaami karaa "ay adag tahay in la helo hal qof.""Waqtigaas, sayidkii cilladeeyay mishiinka maaskaro wuxuu nagu soo dallaci jiray 5,000 yuan maalintii, wuuna gorgortami kari waayay.Haddii aad ku heshiin waydo inaad si degdeg ah u baxdo, dadku kuma sugi doonaan, oo waxaad heli doontaa qarax maalintii oo dhan ah.Qiimaha caadiga ah ka hor, 1,000 yuan maalintii.Lacag ayaa ku filan.Ka dib, haddii aad rabto inaad dayactirto, waxay ku kici doontaa 5000 yuan maalintii badhkeed."Zhao Xiu wuu ka cawday.
Waqtigaas, shaqaalaha ciribtirka masarka caadiga ah wuxuu heli karaa 50,000 ilaa 60,000 yuan dhowr maalmood gudahood.
Khadka wax soo saarka ee Zhao Xiu ee iskiis u dhisay ayaa si degdeg ah loo dejiyay.Markay ugu sarreyso, marka lagu daro khadka wax soo saarka ee aasaaska, wax soo saarka maalinlaha ah wuxuu gaari karaa 200,000 waji-xidhka.Zhao Xiu wuxuu sheegay in waqtigaas, ay shaqeynayeen ku dhawaad ​​​​20 saacadood maalintii, shaqaalaha iyo mashiinnadana asal ahaan ma nasan.
Waxa kale oo ay ahayd muddadan in qiimaha waji-xidhaha uu kor u kacay heer aad u xun.Way adag tahay in laga helo "maaskaro" suuqa, iyo maaskaro caadi ah oo ahaan jiray dhowr senti xitaa waxaa lagu iibin karaa 5 yuan midkiiba.
Qiimaha waji-xidhka rayidka ah ee ay soo saartay warshadda Zhao Xiu ayaa asal ahaan qiyaastii ah 1 senti;meesha ugu sareysa ee faa'iidada, qiimihii hore ee warshadii hore ee maaskarada waxaa lagu iibin karaa 80 senti."Waqtigaas, waxaan heli karaa hal ama laba boqol oo kun oo Yuan maalintii."
Xitaa haddii ay yihiin warshad "dhibaatada yaryar", kama welwelaan amarada.Iyada oo ay jirto yaraanta warshadaha soo saarista maaskaro, bishii Febraayo 2020, warshadda Zhao Xiu ayaa sidoo kale lagu liis gareyay inay tahay shirkad dammaanad qaadka ka-hortagga cudurka faafa ee Guddiga Horumarinta iyo Dib-u-habaynta maxalliga ah, waxayna sidoo kale leedahay bartilmaameed loo qoondeeyay."Tani waa waqtigeena ugu muhiimsan."Zhao Xiu ayaa yidhi.
Laakiin waxa aanay filaynin ayaa ah in "waqtigan iftiiminaya", oo socday muddo bil ah, si degdeg ah loo waayay.
Sida iyaga oo kale, koox ka kooban shirkado yar yar iyo kuwo dhexdhexaad ah ayaa si dhakhso ah loo aasaasay muddo gaaban gudaheed.Marka loo eego xogta Tianyan Check, bishii Febraayo 2020, tirada shirkadaha la xidhiidha waji-xidhka ee la diiwangeliyay bishaas oo keliya waxay gaadheen 4376, koror 280.19% marka loo eego bishii hore.
Tiro badan oo waji-xidho ayaa si lama filaan ah ugu soo qulqulay suuqyo kala duwan.Kormeerka suuqa ayaa bilaabay inuu si adag u xakameeyo qiimaha.Xi'an, oo uu ku yaal Zhao Xiu, "kormeerka suuqu wuu sii adkaanayaa, qiimihii sarsare ee asalka ahaana hadda suurtagal ma aha."
Dharbaaxada dilaaga ah ee Zhao Xiu waxay ahayd soo galitaanka shirkadaha waaweyn ee wax soo saarka.
Horraantii Febraayo 2020, BYD waxay ku dhawaaqday beddelaad heer sare ah oo lagu galo warshadaha wax soo saarka maaskaro.Bartamihii Febraayo, maaskaro BYD waxay bilaabeen inay soo galaan suuqa oo si tartiib tartiib ah u qabsadeen suuqa.Sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahintu, marka la gaaro Maarso, BYD waxay durba soo saari kartaa 5 milyan oo maaskaro ah maalintii, oo u dhiganta 1/4 ee awoodda wax soo saarka qaranka.
Intaa waxaa dheer, shirkadaha wax soo saarka oo ay ku jiraan Green, Foxconn, OPPO, Sangun nigisyada, dharka digirta cas, dharka guriga Mercury ayaa sidoo kale ku dhawaaqay ka qaybqaadashada ciidanka wax soo saarka maaskaro.
"Xitaa ma garanaysid sidaad u dhimatay!"Ilaa hadda, Zhao Xiu wali wuu is celin kari waayay yaabkiisa, “Dabayshu aad bay u kulul tahay.Aad bay u daran tahay.Habeenkii, waxa ay u muuqataa in aanay suuqa oo dhan ka jirin gabaabsi waji-xidho!”
Marka la gaaro Maarso 2020, saadka suuqa oo kordhay iyo xakameynta qiimaha, warshadda Zhao Xiu asal ahaan wax faa'iido ah ma leh.Waxa uu urursaday qaar ka mid ah kanaalada, markii uu ku hawlanaa ilaalinta deegaanka, balse markii ay warshaddii weynayd ee ciyaarta soo gashay, waxa uu ogaaday in awoodda wax gorgortanka ee labada dhinac aanay isku heer ahayn, amarro badanina aanay helin.
Zhao Xiu wuxuu bilaabay inuu naftiisa badbaadiyo.Waxay mar u wareegeen waji-xidhaha KN95, iyaga oo beegsanaya xarumaha caafimaadka ee maxalliga ah.Waxa kale oo ay haysteen dalab dhan 50,000 yuan.Laakiin waxa ay isla markiiba ogaadeen in marka marinnada saadka dhaqameed ee machadyadani aanay cidhiidhi gelin, ay lumin doonaan tartankooda."Soosaarayaasha waaweyni waxay hal mar meel dhigi karaan wax walba laga bilaabo waji-xidhaha ilaa dharka ilaalinta."
Isagoo aan rabin inuu heshiiyo, Zhao Xiu wuxuu isku dayay inuu aado kanaalka ganacsiga shisheeye ee waji-xidhka KN95.Iibka, waxa uu qoray 15 qof oo wax iibinaya warshadda.Intii uu cudurku socday, kharashka shaqaaluhu wuu sarreeyay, Zhao Xiu wuxuu u tudhay lacagtiisa, iyo mushaharka aasaasiga ah ee iibiyeyaasha ayaa kor loo qaaday ilaa 8,000 yuan.Mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxda ayaa xitaa helay mushaharka aasaasiga ah ee 15,000 yuan.
Laakiin ganacsiga shisheeye maaha dawo nafta badbaadisa kuwa sameeya wejiga yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.Si aad maaskaro ugu dhoofiso dibadda, waxaad u baahan tahay inaad codsato shahaadooyin caafimaad oo khuseeya, sida shahaadada CE ee EU-da iyo shahaadada US FDA.Wixii ka dambeeya Abriil 2020, Maamulka Guud ee Kastamku wuxuu soo saaray ogeysiis lagu hirgelinayo kormeerka dhoofinta badeecadaha ee dhoofinta maaskaro caafimaad iyo agab kale oo caafimaad.Warshado badan oo markii hore soo saaray waji-xidhka rayidka ayaa awoodi waayay inay gudbaan baadhista sharciga ee kastamka sababtoo ah ma ay helin shahaadooyin khuseeya.
Warshada Zhao Xiu waxa ay heshay dalabkii ugu waynaa ee ganacsiga dibadda wakhtigaas, kaas oo ahaa 5 milyan oo xabbo.Isla markaana, ma heli karaan shahaado EU.
Bishii Abriil 2020, Chen Chuan ayaa mar kale helay Zhao Xiu.“joojiMa samayn karno tan.”Zhao Xiu wuxuu si cad u xusuustay in dhowr maalmood ka hor, warbaahintu ay hadda soo tebisay warka ah "BYD waxay ka heshay ku dhawaad ​​​​$ 1 bilyan amarada maaskaro ee California, USA".
Markii wax soo saarku joogsaday, waxaa warshadahooda ku jiray in ka badan 4 milyan oo waji-xidhaha la tuuri karo iyo in ka badan 1.7 milyan oo maaskaro KN95 ah.Mashiinka maaskarada ayaa loo jiiday bakhaarka warshadda ee Jiangxi, halkaas oo ilaa hadda ay ku kaydsan tahay.Ku darista qalabka, shaqada, booska, alaabta ceeriin, iwm ee warshadda, Zhao Xiu wuxuu xisaabiyay inay khasaariyeen saddex ilaa afar milyan oo yuan.
Sida warshadda Zhao Xiu, tiro badan oo ah shirkado yar yar iyo kuwo dhexdhexaad ah oo maaskaro ah oo "sameeyay kala badh" ayaa lagu sameeyay isku shaandhayn qeybtii hore ee 2020. Sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta, waxaa jiray kumanaan warshado maaskaro ah oo ku yaal magaalo yar Anhui intii lagu jiray cudurka faafa, laakiin May 2020, 80% warshadaha maaskaro ayaa joojiyay wax soo saarkooda, iyagoo wajahaya jahwareerka amar la'aan iyo iib la'aan.